HUGE 2 Bedroom Apartment Beach Front (Umbono weSixeko) - I-Airbnb
HUGE 2 Bedroom Apartment Beach Front (Umbono weSixeko)
indlu yakhe yeyakho yonke, kwaye isekelwe kwinqaba esekwe ngokufanelekileyo. Sifowuna kuphela ukuba uyasifuna. Uya kuba sezandleni ezikhuselekileyo zeqela lam eliya kudibana nawe kwipropathi kwaye likubonise ngeenxa zonke ukuze uxhamle kuko konke elinokukunika kona.
Indlu yethu enomtsalane enamagumbi ama-2 ibekwe kumgangatho we-2. Ndibuliswe yi-concierge njengoko ungena, ezinye izinto eziphathwayo ziquka ukufikelela simahla kwindawo yokuzivocavoca kunye nedama lokuqubha.
Indlu ilingana nabantu abayi-6 ngokukhululekileyo, siyakushiya usilwa ngokuba yeyiphi ibhedi;
Le ndlu ibekwe kwinqaba esekwe, ngokoqobo ngaphesheya kwesitrato ukuya elunxwemeni nasepakini. Kukho i-Jones i-Grocer kumgangatho ophantsi kunye neklabhu yolwandle ngaphesheya kwesitalato (i-2 min walk) Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlola i-Abu Dhabi. Zonke izinto ezikhangayo ezinkulu zinokufikelelwa ngaphakathi kwe-15 - 25 imizuzu, kubandakanya iGrand Mosque, iLouvre, iFerrari World, i-YAS Island, iFormula 1, iMarina Mall. Ukuhamba ngeshishini indawo yam ngaphakathi kwemizuzu emi-5 ye-Etihad Towers, ADNOC kunye nabanye abaninzi.